Waxeey ka Tageen Dhammaan Deeganada Soomaalida | allsanaag
Waxeey ka Tageen Dhammaan Deeganada Soomaalida
Dawladda federaalka ayaa ka hadashay in aysan jirin ciidan la geeyey gobolka Tigreeyga. Hase ahaatee, ciidanka ku maqan dalka Ereteeriya ayaa lagu qiyaasayaa shan kun 5,000 illaa 7,000 oo ciidan ah. Ciidamada tababarka ku maqan, ayaa ka kalla yimid dhammaan deeganada Soomaalida, balse waxaa cajiib ah waxa Muqdisho gaar uga dhigay ineey habbeen iyo maalin ay ka hadlaan arrintaas oo marar badan ay sheegtay dawladda ineeysan jirin.
Warkii ay soo saartay Qaramad Midoobey ma’aheeyn mid xaqiiq ku salleeysan, waxa warbixintooda ay ku egtahay oo kalliya “Sida la yiri” ciidanka Soomaalida oo xeradii tababarka ka sii baxaya ayaa la arkayey iyo magaalo hebel ayaa lagu arkayey. Hadaba warkaas ayaa ah mid aan sugneeyn, waxaana warbixintan soo ururiyey nin Suudaaneeys ah oo Khartuum jooga kaas oo warbixintiisa aysan dhaafsiisneeyn dhagadhageeyn. Warbixnta waxaa la aamini karaa marka la arko ciidan safka hore ku jira, dhaawac iyo dhimasho la dul tagay, balse ciidan ka baxay xeradii oo laga yaabo in meel kale ay ku soo sammeenayaan aqoon kororsi.
Arrimaha noocaan ah, waxaa buunbuuninaya musharixiinta ay hoggaamiyaan Xasan Shiikh iyo Shiikh Shariif kuwaas oo aan heeyn qorsho ay doorashada ku gallaan, balse ay kaga soo hartay oo kalliya guddiga doorashada ciidanka NISA ka buuxa, ciidankii Ereteeriya la geeyey Tigreeyga lagulla dagaalamay iyo xaalad abuur kale oo badan.
← Kooxda Farsamada Doorashooyinka ee uu magacaabay Ra’isul Wasaare oo kulan yeeshay Sanaag iyo Sool, Kubbadiina waa laga reebay →